Jerry Rawlings waa sharci daro in laga kaluumaysto xeebaha Somalia . Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Jerry Rawlings waa sharci daro in laga kaluumaysto xeebaha Somalia . Wakiilka gaarkaah ee ururka Midawga Africa Jerry John Rawlings oo saxaafadda kula hadlay magaalada Accra ee xarunta wadanka Ghana ayaa waxaa uu si kulul u cambaareeyay kaluumaysiga sharcidarada ah iyo wasaqeyn laguhayo Biyaha Soomaaliya oo uu sheegay inay wadaan qaar ka mid ah wadamada warshadaha ku hormaray ee caalamka.
Jerry Rawlings oo si gaar ah ula hadlay wakaaladda wararka dalka Ghana u faafisa ee GNA waxaa uu tilmaamay in xeebaha Soomaaliya ay dhacaan wax ka baxsan qanuunka caalamiga ah oo ay ka mid yihiin in lagu shubo waxyaabo sun oo ka haray wasaqda warshada Nuclear,ka iyo inay si sharci darroah uga kaluumaystaan maraakiib ka diwaan gashan ka qaar ka mid ah wadamada horumaray.
Danjire Jerry Rawlings wakiilka ururka midawga Africa u qaabilsan arrimaha Soomaaliya waxaa uu wax laga xumaadoku tilmaamay in iyadoo ay Biyaha Soomaaliya joogaan maraakiib dagaal iyo ciidamoka socda ururo caalami ah haddana ay ka dhacaan waxyaabo sharciga ka baxsan sida uu hadalka u y iri.
Rawlings waxaa uu ugu baaqay beesha caalamka inay qaadaan tilaabooyin deg deg oo arrintaan looga hortagi karo dhacdooyinka ka jira Biyaha Soomaaliya isla markaana la ciqaabo oola hor geeyomaxkamada dambiyada dagaalka ee magaalada Hague ee dalka Holland ku taala.
Iyadoo laga faaidaysano bur burka wadanka ka jira ayay wadamoiyo shaqsiyaad kudhiiradeen inay sun ku shubaan ama si sharci darro ah uga kaluumaystaan Biyaha Soomaaliya taasna waa wax aan loo dul qaaan Karin ooo u baahan in laga hor tago ayuu yiri Danjire Jerry Rawlings oo ah Midawga Africa arrimaha Soomaaliya u qaabilsan waxaana uu intaa ku daray in loo baahan yahay in Soomaalida lagu gacan siiyo nadiifinta Biyaha iyo in la xiro shaqsi kasta oo ku lug yeesha.
Tan iyo markii ay dhacday dawladii dhexe ee dalka dhawr jeer ayaa la sheegay in xeebaha dalka lagu xabaalay haraaga nuclear ,ka iyadoo la tuhmo shaqsiyaad Soomaali ah.